१८:४४, ९ डिसेम्बर २०१४ जस्तै गरी पुनरावलोकन
१८ बाइटहरू हटाइयाे , ६ वर्ष अघि
०१:१६, २१ मे २०१४ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
१८:४४, ९ डिसेम्बर २०१४ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
इस दर्शनका केही टीकाकारहरूले ईश्वरको सत्ताको निषेध गरेकोछ। तिनको तर्क छ- ईश्वर चेतन छ, अतः यस जड़जड जगत्को कारण हुन सक्तैन। पुनः ईश्वरको सत्ता कुनै प्रमाणदेखि सिद्ध छैन सकती। वा त ईश्वर स्वतन्त्र र सर्वशक्तिमान् छैन, वा फेरि त्यो उदार र दयालु छैन, अन्यथा दुःख, शोक, वैषम्यादिदेखि युक्त यस जगत्लाई किन उत्पन्न गरता? यदि ईश्वर गर्म-सिद्धान्तदेखि नियन्त्रित छ, त स्वतन्त्र छैन, र गर्मसिद्धान्तलाई न मान्नमा सृष्टिवैचित्र्य सिद्ध हुन सक्तैन। पुरुष र प्रकृतिका अतिरिक्त कुनै ईश्वरको कल्पना गर्नु युक्तियुक्त छैन.
(ख) '''आयोजनात्'''- जड़जड हुनाले परमाणुहरूमा आद्य स्पन्दन हुन सक्तैन र बिना स्पंदनका परमाणु द्वयणुक आदि छैन बनाउन सकते। जड़जड हुनाले अदृष्ट पनि स्वयं परमाणुहरूमा गतिसंचार छैन गर्न सकता। अतः परमाणुहरूमा आद्यस्पन्दनको संचार गर्नका लागि तथा तिनलाई द्वयणुकादि बनाउनको लागि चेतन ईश्वरको आवश्यकता छ।
(ङ) '''सङ्ख्याविशेषात्'''- नैयायिकहरूका अनुसार द्वयणुकको परिणाम त्यसको घटक दुइ अणुहरूका परिमाण्डल्यदेखि उत्पन्न हुँदैन, अपितु दुइ अणुहरूको सङ्ख्यादेखि उत्पन्न हुन्छ। सङ्ख्याको प्रत्यय चेतन द्रष्टादेखि सम्बद्ध छ, सृष्टिका समय जीवात्माहरू जड़जड द्रव्य रूपमा स्थित छन् एवं अदृष्ट, परमाणु, काल, दिक्, मन आदि सब जड़जड छन्। अतः दुइको सङ्ख्याका प्रत्ययका लागि चेतन ईश्वरको सत्ता आवश्यक छ।
(च) '''अदृष्टात्'''- अदृष्ट जीवहरूका शुभाशुभ गर्मसंस्कारहरूको आगार छ। यी संचित संस्कार फलोन्मुख भएर जीवहरूलाई गर्मफल भोग गरानेका प्रयोजनदेखि सृष्टिका हेतु बन्दछन्। किन्तु अदृष्ट जड़जड छ, अतः त्यसलाई सर्वज्ञ ईश्वरका निर्देशन तथा संचालनको आवश्यकता छ। अतः अदृष्टका संचालकका रूपमा सर्वज्ञ ईश्वरको सत्ता सिद्ध हुन्छ.
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/434048" बाट अनुप्रेषित